Sleeveless Ruffles Lace Bow White Midi Girls Dress - Free Shipping & No Tax | ၀ ယ်သည် WoopShop®
Sleeveless Ruffles Lace Bow White Midi Girls ဂါဝန်
$18.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $30.99
Kid Size ကို 2-3Y 1-2Y 4-5Y 3-4Y 6-12M
Sleeveless Ruffles Lace Bow White Midi Girls Dress - 2-3Y backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: ချည်, Polyester
အသက်အပိုင်းအခြား: 7-12m, 13-24m, 25-36m, 4-6y
ရာသီ: Four Seasons
silhouette: Ball ဂါဝန်
80 အရှည်: 43 ရင်သား: 50 အသက်: 6-12 လ
၉၀ အရှည်၊ ၄၆ ရင်သား၊ ၅၃ အသက်၊ ၁-၂ နှစ်
115 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ဂါဝန်လေးသည် Krivo တည်ရှိသော်ငြားလည်းငါပြန်လုပ်မယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါဝယ်ဖို့အကြံပေးတယ်။ ပါဆယ်သည် ၁၀ ရက်ကြာလာသည်
ကိုယ်ကြိုက်တယ်! ကလေးများအတွက်ပိတ်စိမ်းကဲ့သို့အလွန်ကောင်းသောတစ်သျှူး! ငါချစ်စရာကောင်းတဲ့!
ယေဘူယျအားဖြင့်တော့မဆိုးဘူး၊ လှလှပပချုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ အမြန်ပို့ဆောင်ပါ၊ မင်းလွင်အမြန်။ ငါတို့က ၁၁ လ (၇၄ စင်တီမီတာ) ရွာကအရမ်းကောင်းတယ်။
Awesome ကိုဝတ်စားဆင်ယင်! Yu မှာအဖုံးရှိသည်။ ချည်သားကဲ့သို့နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအထည်။ ၉၀ စင်တီမီတာအမြင့်ရှိ ၃-၄y အရွယ်၏အရွယ်အစားသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ သို့သော်နွေရာသီတွင် (အရွယ်အစား (၁) ထက်နည်းရန်သာဖြစ်နိုင်သည်)))) ငါအခြေအနေကိုရောက်ခဲ့တယ် (အော်ဒါလိပ်စာမှားပို့မိသည်) )-ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုမှုကြောင့်အမိန့်ကိုချက်ချင်းပယ်ဖျက်ပြီးငါပြန်လည်စီစဉ်ခဲ့သည်။ အကြံပြုပါ။